Hery Rajaonarimampianina : Hanao fanambarana -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Hanao fanambarana
Araka ny fampandrenesana avy amin’ny fiadidiana ny Repoblika dia hanao valandresaka ao amin’ny Colbert Antaninarenina ny filoha Hery Rajaonarimampianina anio amin’ny 11h30. Mazava ho azy fa mifandraika amin’ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana no ho votoatin’izao fanambarana ataon’ny Filoha androany izao, dia ny fifidianana filoham-pirenena izay hatao amin’ny faha-7 novambra ho avy izao. Mifarana amin’ny faha-21 aogositra tokoa mantsy ny fe-potoana farany handraisan’ny HCC ny antontan-taratasy filatsahan-kofidian’ireo kandidà. Tafakatra 13 ny isan’ireo efa nanatitra izany tetsy Ambohidahy raha ny tarehimarika farany azo omaly.
Filatsahan-kofidian’ny filoha Hery Rajaonarimampianina, izay no nandikan’ny maro ny fametraham-pialàn’i Rivo Rakotovao tsy ho filohan’ny antoko HVM. Ny lalàm-panorenana mantsy dia manambara fa ny filohan’ny Antenimieran-daholona no misolo toerana ny filoham-pirenena raha toa ka milatsaka ho isan’ireo kandidà ny filoha am-perinasa. Herinandro sisa anefa dia higadona ny datin’ny 21 aogositra koa heverina tokoa araka izany fa mifandraika amin’izany izao valandresaka hataon’ny filoha etsy amin’ny Hotel Colbert androany izao.
Ny zavatra azo ambara dia ny hoe maro ireo asa fanarenana sy fotodrafitrasa fototra vitan’ity fitondrana Hery Rajaonarimampianina ity tao anatin’izay efatra taona izay. Niverina ny fitokisan’ireo mpamatsy vola sy ny Fianakaviambe Iraisam-pirenena. Tafaverina ho isan’ny firenena afaka mifandray sy miara-miasa amin’izao tontolo izao i Madagasikara raha tsy hiresaka afa-tsy ireny Fihaonamben’ny Frankofonia sy ny COMESA natao teto ireny, ny CBI tany Frantsa sy Afrika Atsimo, tsy hotanisaina eto intsony ireny fampidirana mpiasam-panjakana ireo mpampianatra FRAM 10 000 isan-taona ireny, sns.
Tsy ilay endrika ratsy tamin’ny krizy tamin’ny 2009 sy nandritry ny tetezamita iny intsony no sary mivoaka eo anivon’ny mpikambana ao amin’ny SADC. Madagasikara mandroso sy nahavita ezaka lehibe tamin’ny fampijoroana fandriampahalemana sy fitoniana ara-politika ...Tohiny
Rivo Rakotovao : “Andry Rajoelina no nampahantra ny firenena”